PressReader - Isolezwe: 2017-11-14 - Kumqoka ukubikela abangasekho uma uzohlaba
Kumqoka ukubikela abangasekho uma uzohlaba
KUKHONA imindeni esihlale yazi ukuthi uma ike yachitha igazi kukhona isidumbu esizophuma ekhaya. Eminye yale mindeni isize yakholwa wukuthi ayisoze yalichitha igazi ngoba yesaba isifo esihlale sivela uma ike yalichitha. Igcina ingasahlabi uzwe ithi thina asisalichithi igazi ngoba uma sike salichitha kuvele kuhambe umuntu. Okusuke kuxake wukuthi kungani ingasukumi iyofuna imbangela kunokuthi iqome ukuthi ingabe isayenza imisebenzi. Isikhathi esiningi kusuke kukhona okukhona okwenzeka emndenini kumbe okufanele kugcinwe kumbe bakhohliswe yithina zinhlanya ngokuthi uma nike nachitha igazi kuyophuma umphefumulo ngaphandle kokuthi uhlanya lubasize ngokuvala lokho lubheke nokuthi kubangwa yini.
Kufanele ukuthi ligcine litholakele ikhambi lale nkinga nembangela yayo. Kuningi okuyimbangela yalokhu. Okunye kwako kuthinta umlando okunye kuthinte isenzo somunye umuntu esingathi ukuthakathana nokuphambaniselana kwemindeni abanye abakubiza ngamanzi amnyama. Kokunye kusuke konakele khona emsamo uqobo lwawo okudinga ukuthi kuze kwenziwe into ethize ukuze kuvaleke lokho.
Ake sikuhlaziye lokhu. Kuyenzeka emndenini othize kube khona umuntu owahamba kabuhlungu kwachitheka igazi lakhe okwathi uma lichitheka langaqoqwa lelo gazi lakhe. Ake sithi kukhona umuntu owabulawa abantu ngokuthi bamnqume kumbe bamgwaze ngomkhonto wopha igazi kakhulu waze wafa ebulawa wukopha. Kuze kufike isikhathi sokuthi afihlwe igazi elagobhoza lingazange liqoqwe ngokuthi livalwe ngokwendlela yesintu. Lowo muntu walandwa ngokwesintu wafihlwa ngendlela efanele kodwa esefihliwe kwangaba khona othi igazi elichithekile efa silibuyisa kanjani. Lelo gazi elagobhoza lophela emhlabathini yilona-ke elivula inxeba lokuthi noma yini ethintwayo echitha igazi ekhaya bese imemeza leliya gazi elachitheka. Ukuhlangana kwegazi lowafa naleli elisuke lichithwa ekhaya kubiza elinye igazi bese kufa umuntu ekhaya.
Okwesibili uzothola ukuthi umndeni waphehlelana amanzi amnyama ngokuthi elinye ilungu emndenini lihlabe isilwane livala abanye bomndeni ngokuthi uma kukhona othinta ithongo lakulowo muzi ngesilwane kuvele lelo gazi lesilwane esihlatshiwe limemeze umuntu othize emndenini bese kufa umuntu. Lokhu sizothi wukuphehla amanzi amnyama ngoba kwenziwe yisandla esiqonde ububi nokucekela phansi.
Okunye okungaba yimbangela kungaba yisilwane esahlatshwa emndenini ngenhloso yokuhlabela othize kanti nimhlabela nimenzela umsebenzi seniyageja kukhona lona ozokhweleza akhale ngokuthi yena akazange enzelwe lutho. Uyobe esethatha igazi lesilwane alenze isiqalekiso kulowo mndeni ngokuthi kubhubhe umuntu ekhaya uma kukhona ochithe igazi abize ithongo lakulowo muzi. Inselelo yalokhu wukuthi njengoba sihlale sithanda ukuhlaba size siye nasezinhlanyeni zisitshele ukuthi asihlabe, lokho sikwenza kanti bakhona abangaphambili nabo abakhala ngokuthi abazange bahlatshelwe.
Yingakho-ke kumqoka ukuthi uma uzokwenza umsebenzi ubike kusekude ubazise abangasekho ukuze bakuphendule uzwe ukuthi ngabe awususi yini ulaka.
Zonke lezi zindlela zinesisombululo sakhona. Uma kukhona umuntu emndenini owahamba kabuhlungu, kwagobhoza igazi lakhe, kufanele kube khona indlela yokuqoqa lelo gazi lakhe. Lokhu kwenzeka kakhulu kubantu abahamba ngezingozi zezimoto, ukudutshulwa, ukubulawa ngokunqunywa nangokugwazwa. Sivame ukuthi uma sesiyolanda umuntu lapho efele khona ngehlahla lomphafa singabe sisayibheka eyokugobhoza kwegazi lakhe kanti yilapho indaba sesiyishiya khona.
Ngokwamanzi amnyama, lokhu kunzima ngoba kufanele ukuthi kuze kuyovalwa lowo mkhokha owaphehlwa owomndeni ukuze kuchithwe igazi ekhaya.
Uma nihlaba kanti kukhona okhwelezayo bese ephendula izinto, kufanele kutholakale ukuthi amacala asele ngawobani nokuthi kufanele alungiswe kanjani ukuze kungathi uma kuhlatshwa bese kufa umuntu ekhaya.
Kumqoka-ke lokhu ngoba siyaye sithi konakele emsamo sibe sisho izinto ezingelapheka kodwa imindeni igcine ikhohliswa ngokuthi nina anisoze nachitha igazi kulo mndeni. Abalowo mndeni bagcina sebehamba bethi thina asisalichithi igazi ekhaya. ASIPHHALE Alikho inxeba elopha lingapholi.
Bhedlindaba: 0335691317/ 079 7471 911/ 072 8972 001.